UMngeni Water Amanzi nesinxuso emphakathini – SIVUBELAINTUTHUKO
Kunxuswa izakhamizi ezakhele isifunda iLembe, iTheku noGu ezithola amanzi ngaphansi koMngeni Water Amanzi ukubekezela njengoba le nkampani izama ukulungisa amapayipi aye aphazamiseka ngesikhathi sezikhukhula agcine eqhuma ngenxa yokuwelwa amadwala nokuguguleka kwenhlabathi.
Isitatimende esikhishwe ngabaseMngeni Water Amanzi sinxusa abantu ukusebenzisa kahle lawo manzi abawatholayo ngesikhathi izama ukubuyisela isimo kwesijwayelekile. Kuvela ukuthi imvula enamandla egcine isifundazwe sihlaselwa yizikhukhula kwaphazamiseka namapayipi athumela amanzi emphakathini sithinte noMngeni Water Amanzi wagcina ungasakwazi ukuthumela amanzi emphakathini. Kubikwa ukuthi amadamu aye angenelwa ukungcola okukhulu kwaphazamiseka namaphaphu akwazi ukuhlanza amanzi.
Izindawo okuvela ukuthi zithinteke kakhulu izingxenye ezithile zaseThekwini, eMhlali, eDarnall, eZamani naseZikwazi. Isihlanzi sase-Durban Heights Water Treatment Plant kuthiwa sishayeke kakhulu njengoba kunedwala eliwele khona kwaphazamiseka namanzi alandwa eNagle Dam. “Ukuphazamiseka kwamapayipi nezinjini kusho ukuthi bazoba bancane abantu abathola amanzi ngalesi sikhathi kusazanywa ukulungisa isimo. Siyazama ukulungisa isimo ukuze abantu baqhubeke nokuthola amanzi ngendlela ejwayelekile. Lesi simo sisicindezele njengoba uMngeni Water Amanzi usabhekene nomqansa wokuhlanza amanzi owahambisa esifundeni uGu okugcine kushiya abantu baseMthwalume, Ifafa, Bazley nezinye izigodi bengenamanzi,” sisho kanje.
Isitatimende sicele abantu ukusebenzisa amanzi ngokucophelela ngesikhathi ithimba laseMngeni Water Amanzi lizama ukulungisa umonakalo odalekile. Kuthiwe ikhona imizamo eyenziwayo ukusheshisa ukubuyiselwa kwamanzi kubantu kanjalo zikhona nezinye izindlela ezizanywayo ezizokwazi ukulekela ukuze abantu bebe beqhubeka nokuthola amanzi ahlanzekile ngesikhathi kulungiswa amapayipi.
MAGAYE CELE LUSEQHULWINI kwiMeya yesiFunda iLembe, udaba lokuqinisekisa ukuphuthunyiswa kwezinsiza kubantu kanye nodaba lokwakhiwa kwengqalasizinda eseqophelweni eliphezulu. Lezi zindaba ziqinisekiswe yiyona qobo iMeya yalesi siFunda, uKhansela uThobani Shandu. IsiFunda iLembe kuzokhumbuleka ukuthi sibunjwe ngoMasipala abane abangaphansi kwaso. Kubona kubalwa uMkhandlu waseMandeni, enyakatho yesiFundazwe iKwaZulu Natal noholwa nguKhansela Thabani Mdlalose. Bese kuba uMkhandlu waseNdwedwe enyakatho yeTheku wona […]
TSEPO MOTLOKOA UNGQONGQOSHE woMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal uNkk Nonhlanhla Khoza usehlabe ikhwelo kwizakhamizi zesifundazwe ukuba mehlo made ziqaphe eqolo njengonwabu amaqola asembhidlangweni wokuwaka abantu ngemisebenzi kahulumeni okumele ziyigwazele ngoR9 000 ukungena kuyona. UMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi ukhiphe isitatimende lapho uNkk Khoza exwayisa khona abantu ngokuthi mabazi ukuthi imisebenzi kahulumeni kayidayiswa. Uthe lamaqola azibiza ngezikhulu zeminyango kahulumeni ngamaqola […]
ABASE-MDDA babonga i-iGrantee Orientation Workshop